तपाईंको समस्या, हाम्रो सुझाव - १५ - Safal Stories
Home Reader's Blog तपाईंको समस्या, हाम्रो सुझाव – १५
मलाई मेरो कक्षामा संगै पढ्ने एकजनाले मनपराउथ्यो ।त्यो कुरा मेरा साथीहरुलाई पनि थाहा थियो । तर मलाई त्यो मान्छे घमण्डि लाग्थ्यो र वास्ता गर्दिनथे । तर केही वर्ष पछि मैले पनि त्यो केटा संग कुरा गरे, २/३ पटक संगै घुम्न पनि गएं त्यो भन्दा पहिले कहिल्यै पनि गएको थिईन र पछि पनि गएको छैन । उसले विवाहको प्रस्ताव राख्यो । मैले १ /२ बर्ष पछि गर्ने कुरा गरे । तर मलाई केही महिना कुरा गरेपछि पूनःउक्त व्यक्तिसंग बोल्न नै मन लाग्न छोड्यो । माया पनि लाग्दैन। मैले उसलाई पनि यो कुरा भने । तर ऊ छुट्टीनै नसक्ने कुरा गर्छ । म भने उसंग विवाह गरेर खुसी नै हुन सक्दिन । मलाई थाहा छ गल्ती मेरो हो, तर मलाई कुनै माया नै छैन भने विवाह गरेको के नै अर्थ हुन्छ र ? म उसलाई कसरी सम्झाउन सक्छु ? उ तिमी मेरो नभए अरुको पनि हुनदिन्न भन्छ । अन्त विवाह गर्ने नसोचे पनि हुन्छ भन्छ । मेरो साथीहरु पुलिस केस गर्न सल्लाह दिईरहेका छन् तर म त्यस्तो गर्न सक्दिन । यस्तो अबस्थामा मैले के गर्दा राम्रो होला ?
कहिलेकाहीं आकर्षणलाई प्रेम सम्झेर हामीले आफै जीवनमा समस्या निम्त्याउन सक्छौं । तपाईंको समस्या सुन्दा लाग्छ, तपाईंबाट पनि त्यही गल्ती भएको थियो । केही छिन बोल्दा, प्रेमिल गफ सुन्दा , घुम्न जाँदा आनन्द लाग्नु स्वाभाविक हो । तर प्रेम भनेको यी भन्दा टाढा हुन्छ । व्यक्तिलाई जब हामीले सम्पूर्ण रुपमा स्वीकार्छौं, जब उसका कमजोरीहरु बारे थाहा पाएर पनि उसका गुणहरुलाई प्राथमिकता दिन्छौं, तब प्रेम हुन्छ अनि सम्बन्ध विकसित हुन्छ र प्रेमिल गफहरु, भ्रमणहरु सार्थक हुन्छन् ।
तपाईंले आफू सम्बन्ध प्रति जिम्मेवार महसुस नगरी नै उसलाई तपाईंको प्रेममा आशा जगाइदिनुभयो । त्यो नै तपाईंको गल्ती हो र तपाईंको संदेश पढ्दा लाग्छ, तपाईंले त्यो गल्ती महसुस गरिसक्नुभएको छ । तपाईंका अनुसार, तपाईंले ती व्यक्तिसंग माफी पनि मागीसक्नुभएको छ । र, अब प्रेम गर्दिन भन्नुभएको छ । जीवन तपाईंको हो, निर्णय तपाईंको हो । तर कहिलेकाहीं हामी आफूले लिने निर्णयले अरुको व्यक्तिलाई असर गर्छ । केही छिन सम्बन्धमा रहनु र त्यसपछि सम्बन्ध तोड्नु निर्णयमा तपाईं पुग्नुले पक्कै पनि ती व्यक्तिलाई असर गर्यो । अब तपाईंले गल्ती महसुस गर्नुभएको छ र माफी पनि माग्नुभएको छ भने , यही कुरालाई अगाडी बढाइरहनु तपाईं दुवै जनाको लागि राम्रो हुँदैन ।
बाहिरबाट हेर्दा उनको त्यो एकोहोरोपनाले तपाईंलाई मात्र असर गरिरहेको देखिन्छ । तर भावनात्मक तथा मानसिक रुपमा ती व्यक्तिमा झन् बढी असर परिरहेको छ । त्यसैले यस्तो समयमा समझदारी अपनाउनुपर्छ । पहिलो कुरा त उनलाई स्पष्ट रुपमा सम्झाउनुहोस् । उनी तपाईंको कुरा सुन्न नै खोज्दैनन् भने उनको साथीलाई भेटेर आफ्नो कुरा राख्नुहोस् र बुझाउनुहोस् । तपाईंले सम्झाउनु भन्दा साथीले सम्झाएको बढी प्रभावकारी हुन्छ ।
ती व्यक्तिले बारम्बार फोन गरिरहन्छन् भने आफ्नो फोन नम्बर परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ । सामाजिक संजालमा ती व्यक्तिबाट टाढा रहन सक्नुहुन्छ । र, सकेसम्म केही समय भेटघाट नहोस् भन्ने तरिकाले हिड्नुहोस् । यदि संगै पढ्दै हुनुहुन्छ भने उनका अगाडी उनका साथीहरु माझ नजानुहोस्, अलग्गै बस्नुहोस् । यदि दुवै जनाका साथीहरु साझा छन् भने आफ्नो साथी सर्कल परिवर्तन गर्नुहोस् । यदि यति गर्दागर्दै पनि उनी पहिले जस्तै बनिरहन्छन् भने उनले मान्ने व्यक्ति, जस्तै शिक्षक, साथी, दिदी, दाइ, बहिनी या अरु कसैलाई भेटेर खुलस्त रुपमा कुरा गर्नुहोस् र उनलाई सम्झाउन पठाउनुहोस् ।
( उहाँलाई तपाईं पनि केही सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस् । )
Previousनराम्रा बानीहरु कसरी हटाउन सकिन्छ ? ५ टिप्स
Nextटोनी मरिसनका प्रेरक भनाइहरु